I-SINGLE VS DOUBLE KITCHEN SINK (I-PROS & CONS) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-single vs Double Kitchen Sink (i-Pros & Cons)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiyantlukwano phakathi kwesinki enye yokutya ekhitshini kunye neendleko kunye neengozi. Ikhitshi kulapho uninzi lolonwabo, ukutya kunye nokupheka kwenzeka kwindawo yosapho yemihla ngemihla kunye nesinki yekhitshi kusenokwenzeka ukuba isetyenziswe ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into ekhitshini.
Ukucwangciswa kunye nesigqibo sokusebenzisa isinki enye okanye kabini ekhitshini ixhomekeke kwindlela eya kusetyenziswa ngayo ikakhulu.
Izitya ezityiwayo ezizodwa zilungele ikhitshi elincinci elinendawo encinci yeemethi; Ngelixa isitya sokuntywila kabini sifezekile ukuba kuninzi ukupheka kunye nokuhlamba into eyenzekayo kwaye ukuba indawo yetheyiphu ivumela isinki kabini.
indlela yokwenza iimpawu zomtshato
Umahluko phakathi koSinki abangatshatanga nababini
I-Single vs Double Sink iindleko
I-single kunye ne-Double Sink Pros kunye ne Cons
Iinkonzo zeSinki ezizodwa
Isitya esinye sokuntywila esinkini
Iinkonzo ezimbini zokuntywila kwesinki
Isitya esiphantsi seSink Bow
Ngaba iKhitshi elinye okanye iKhitshi eliSibini eliSink lilunge ngakumbi?
Isinki yesitya esinye idla ngokuba nesitya esinye esikhulu nesinzulu esenza ukuba kuhlambe izinto ezinkulu ezinjengeembiza neepani. Inoluhlu olubanzi lobungakanani obulingana nekhitshi, ngakumbi ikhitshi elinendawo encinci yokubala.
Kukho izitya zokuhlambela ezizodwa ezinendawo yokuma eyakhelweyo kwelinye icala eyenza iipleyiti zomoya zokomisa, iikomityi kunye nezinto zesilivere ngokulula. Isinki yesitya esinye ilunge ngakumbi ukufakelwa kwesinki yekona. Kuba isitya esinye sinomsele omnye kuphela, ufakelo luyakhawuleza, lula kwaye alubizi.
Kwelinye icala, isitya sesinki esiphindwe kabini sinezitya ezimbini kwiyunithi enye eyahlulwe sisahluli esinobukhulu obulinganayo okanye isitya esinye isiqingatha sobukhulu buncinci kwaye ngamanye amaxesha singekho nzulu kunesona sitya siphambili.
Ngokwesiqhelo isitya esiphambili simalunga nee-intshi ezingama-21 kwaye isitya sesibini siyi-intshi ezili-15 ubuncinci- kodwa isinki ephindwe kabini iza kuluhlu lobungakanani kunye noqwalaselo.
Ukuba nesitya sokuntywila kabini kukuvumela ukuba wahlule izinto ezinobunzima kwizinto ezibuthathaka zeglasi kwaye ube nesitya esinye sokuntywila kunye nesinye isitya sokulahla.
Ngenxa yoku, kukho ukwanda kobunzima kufakelo kuba elinye icala lesinki liya kuba nenkunkuma. Ngenxa yesinki yesitya esiphindwe kabini esinemisele emibini, enye ifuna ukunxibelelana nomjelo ophambili ngaphambi kokungena kumgibe wenkunkuma.
Isinki yesitya esinye ixabisa ngaphantsi kwesinki yesitya esiphindwe kabini ngenxa yesayizi kunye nezinto ezisetyenzisiweyo. Ukufakela isinki enye kuya kubiza malunga ne-150 yeedola ngelixa iindleko zokufaka isitya sokubhabha esiphindwe kabini sijikeleze i- $ 175.
Ngokomndilili, isinki yokwehla okanye isinki yokuzihombisa eya kuthi ixabise i $ 200 ukuya kwi-500 yeedola, oku kunokuba sisinki esinye okanye kabini ngokuxhomekeke kwimodeli.
Isinki yekona iya kuxabisa phakathi kwe- $ 300 kunye ne-600 yeedola ekwafumaneka njengendawo enye okanye isinki yesitya esiphindwe kabini.
Ukuntywila kwisinki okufumanekayo njengesinki enye nesinki ephindwe kabini iya kuxabisa nge-avareji ye- $ 300 ukuya kwi- $ 2,000; Ngelixa isinki yendlu yefama ibiza phakathi kwe- $ 500 kunye ne- $ 2000 kwaye ifumaneka kwisitayile esinye nesibini.
Enkulu Isiqithi sasekhitshini esinki .
Kubalulekile ukumisela izinto ezilungileyo nezingalunganga zokuba nesinki enye okanye kabini xa ujonga indlela osebenza ngayo ekhitshini lakho ngexesha lokulungiselela ukutya, ukuhlamba nokucoca izinto ezisetyenziselwa ukupheka.
Umntu kufuneka azazi zombini izibonelelo kunye nokusilela kwisitayile sokuntywila ekhitshini. Ngelixa isitya esinye esinzulu sinokuhlamba iimbiza ezinzima kunye neepani; isinki ephindiweyo iya kukuvumela ukuba ucoce, uhlambe izitya kwisitya esinye kunye nathi esinye isitya sokomisa.
• Ngeesinki zesitya esinye, kukho iipompo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
• Izitya zokuntywila ngesitya esinye zibiza ixabiso elincinci kwaye kulula ukuzifaka kuba inye kuphela idreyini yamanzi yokudibanisa ukuze isinki isebenze.
• Kukho indawo eninzi yokuhlamba iitreyi ezinkulu, iipleyiti, iimbiza, iipani kunye neewoks kwizitya ezityiwayo ezizodwa.
• Izitya zesitya esinye zinezibonelelo ezininzi kwaye zihlala zilunge ngakumbi kwikhitshi elincinci kunye nendawo yokulinganisa encinci.
• Kulula ukucoca kunye nokugcina isitya esinye.
• Izitya ezityiwayo ezizodwa azinabhetyebhetye kuba kunzima ukuhlamba, ukuhlamba nokukhupha izitya kunye nokusika.
• Akukho ndlela yokwahlula izitya ezimdaka nezicocekileyo; kwaye ayikuvumeli ukuba wahlule inyama enyibilikileyo ukuthintela ungcoliseko.
• Kwisinki yesitya esinye sokulahla inkunkuma, xa isinki izele ngamanzi okanye izitya ezimdaka ukulahlwa kwenkunkuma akunakufikeleleka.
• Isinki zesitya esinye zinokusebenzisa amanzi kunye nesepha xa uhlamba izitya.
• Isinki zesitya esinye ziya kufuna indawo eyahlukileyo yokomisa. Isomisi esakhelwe-ngaphakathi sinokufuna indawo enkulu yokubala.
• Izitya zesinki ezibini zinokuguquguquka kwaye ziyasebenza kuba ikuvumela ukuba ulungiselele izidlo ezinje ngemifuno kwisinki enye ngelixa ufumba izitya kunye nezinye izinto kwisitya esinye.
• Ukuba nesitya sokuntywila kabini kuvumela ukugcina isitya esinye singenazintsholongwane xa unyibilikisa inyama yenkukhu ekrwada okanye inyama kwesinye isitya.
• Ukulahlwa kwenkunkuma kuhlala kufikeleleka.
• Isitya sokuntywila kabini sikuvumela ukuba ufunxe izitya kwelinye icala kwaye uhlambe izitya kwelinye icala. Ikwavumela ukuba wahlule izitya ezinzima ezingcolileyo kwizinto eziethe-ethe.
• Isinki ephindaphindwe kabini yesitya ngokuzenzekelayo ikhulula indawo ebekungasetyenziswa ngendawo eyomisayo; kuba ungasebenzisa esinye isitya ukomisa izitya ezicocekileyo emva kokuhlamba.
• Ukuba kuphela sisiqingatha sesitya sokuhlambela esisetyenziselwa ukuhlamba izitya, sisebenzisa amanzi amancinci kunye nesicocisi.
• Elinye icala elisezantsi lesinki yesitya esiphindwe kabini bubungakanani kunye neprofayili elinokuyisebenzisa kwisitali sokubala kuba isitya esiphindwe kabini sesitya sinokulinganisa ukuya kuma-40 ukuya kuma-48 e-intshi ubude. Kwaye ke kunzima ukulingana kwindawo encinci yekhitshi.
• Ukuba nesitya sokuntywila kabini kukwathetha ukuba unokukhetha umbane omncinci.
• Kwisinki yesitya esiphindwe kabini kwisitya esinye esincinci, yenza kubenzima ukuhlamba izinto ezinkulu ezifana neepani zokutshisa.
• Izitya ezityiwa kabini zinexabiso eliphezulu ukuthenga, kuya kubiza imali eninzi kwaye kuyadinisa ukuzifaka.
Ukuqukumbela, zombini isinki esitshatileyo kunye nesibini esitshini sineenjongo zazo kwindawo yakho yekhitshi. Sidwelise izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kuzo nganye yezi iintlobo zeesinki zasekhitshini .
Thatha ingqalelo yendawo yakho yokubala, iikhabhathi kunye nezinto zokubala ekhitshini lakho. Cinga ubungakanani, imilo, isitayile, izinto kunye noqwalaselo lwesinki yekhitshi esebenza ngcono kuwe.
Isinki yesitya esiphindwe kabini yayithandwa ngakumbi ngaphambi kokuyilwa komatshini wokuhlamba. Uyilo lwayo luvumele ukuhlanjwa ngokulula kwezitya. Ukuba nesitya esahluliweyo sisebenza sokwahlula izitya ezimdaka kwezicocekileyo.
Kule mihla, nangona kunjalo isitya esinye sokuhlambela sinika ukhetho oluninzi lokumiliselwa kwetephu, iindleko ezingaphantsi, kulula ukuzicoca kunye nokubonelela ngendawo yokuhlamba izinto ezinkulu ezingenakulunga kwindawo yokuhlamba iimpahla.
Khumbula, olona khetho lulolwakho kwaye sinethemba lokuba uyakonwabela ukusebenzisa ikhitshi lakho kwiminyaka ezayo.
Mandiyohlamba izitya kwisitya sethu sasekhitshini, ndikulalise xa usele kakhulu.
Owu, kunokuba kuhle ukuguga kunye nawe…
Kwesinye isikhokelo sokuyilwa kwangaphakathi esihambelanayo ndwendwela iphepha lethu kwi iintlobo zeefompo zasekhitshini .
Iindwendwe zeendwendwe zemitshato yaselwandle
Imisesane yesithembiso ebhalwe kwizibini ezitshatileyo
Imibono yezipho zekrisimesi kumfazi wam
Uyilo lwekhishini gourmet
iilokhwe zomtshato kunye nobukhulu obunemikhono